Japana · Mey, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Japana · Mey, 2016
Tantara mikasika ny Japana tamin'ny Mey, 2016
Ny Fiovàn'ny Hatsaràn'Endrika sy Bika Tao Japàna Tato Anatin'ny 100 Taona
Hevitra 28 Mey 2016
Miainga avy amin'ny volo lava mankany amin'ny fohy, avy any amin'ny ankosotra matevina ka hatramin'ireo tsotsotra, nandalo fiovàna mahavariana ny fikolokoloana hatsaràn-tarehy tao Japàna tato anatin'ny 100 taona farany.
‘Tsy Tiako Ho Voan'ny Homamiadana Toa Ahy Ny Ankizy, Na Iza Izy Na Iza’, Hoy Ny Mponina Iray Tao Fukushima
Fahasalamàna 27 Mey 2016
Nitafa taminà vehivavy tanora iray voatily ho voan'ny homamiadan'ny tiroida, avy ao amin'ny Prefektioran'i Fukushima, teboka aotra nipoiran'ilay loza nokleary tamin'ny Martsa2011 ny mpamokatra sarimihetsika tsy miankina iray.
Tanàna Japoney Nampiasa Sary Navoakan'ny Mampatahotra Solosaina Hampianarana Ny Mponina Hanavotr'Aina Amin'ny Tsunami
Media sy Fanoratan-gazety 23 Mey 2016
Fantatrao ve hoe aiza no ihazakazahana andosirana raha mandondona ny tsunami? Nanao "simulation" ny tanànan'i Kamakura hanampy ny mponina amin'ny famaliana izany fanontaniana izany.
Tahirin-Tsary Bobaka Ahitana an'i Shina sy i Japan Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa
Shina 21 Mey 2016
Kaonty Twitter roa manolotra ireo jeritodika ilaina indrindra raha miresaka ady lehibe faharoa tany Shina sy ny ambin'i Azia.
Sarin-Janabolana Avy Amin'ny Google Mampiseho Ny Fahapotehana Vitan'ny Fihontsahan'ny Tany Taorian'ny Fihovitrovitry Ny Tany Tao Japan
Media sy Fanoratan-gazety 13 Mey 2016
Farafahakeliny 49 ny isan'ny olona matin'ny fianjeran'ny tranobe sy fihontsahan'ny tany maro, ary an'aliny ireo tsy maintsy nafindra toerana vokatry ny fiverimberenan'ny vokatry ny fihovitrovitry ny tany mahery vaika.
Fantaro Ilay Kintan'ny Youtube Ao Japàna
Hehy 08 Mey 2016
Iza no iray amin'ireo kintan'ny Youtube malaza indrindra tsy mbola renao? Torohevitra iray ity: any Japàna izy no monina.
Dimy Taona Lasa Izay, Noravaravain'ny Tsunami i Japan, Manao Jery Todika Ny Mpanatontosa Sarimihetsika Iray Ankehitriny
Fampandrosoana 05 Mey 2016
Namokatra lahatsarim-panadihadiana maharitra ora iray miresaka ny tolona isan'andro ataon'ny mponina amin'ny tanàna kely iray hanorina ny tanànany indray taorian'ny fandravaravana nataon'ny Tsinami an'i Japan tamin'ny 11 Marsa 2011 ilay Kanadiana mpanatontosa filma antsoina hoe Estelle Herbert.
Fahalalahàna miteny 04 Mey 2016